विश्व् साइकलयात्री पुष्कर शाहको यात्रा सस्मरण पुस्तक-World Cycle Traveller of Nepal Puskar Shah's Book On Market ~ Khabardari.com
विश्व् साइकलयात्री पुष्कर शाहको यात्रा सस्मरण पुस्तक-World Cycle Traveller of Nepal Puskar Shah's Book On Market
World Cyclist Pushkar Shah of Nepal has visited more than 150 countries on his bicycle covering 221,000 km in 11 years and has also climbed Mt Everest. He had been jotting down all of his travel-experiences on his diaries all these years. And to make his stories available to people all over the world, the short writings have been compiled in the form ofabook titled ‘Sansar lai Sadhe Pach Fanko’.
The book was jointly launched by Shah’s mother Naram Kumari Shah and actor Sharmila Malla at the premises of Nepal Academy Hall in Kamaladi on Saturday. Actor Malla had initially encouraged the cyclist for the journey by buying himabicycle. Read two part of his book onlne exclushive in Khabardari.com.
विश्व् साइकलयात्री पुष्कर शाहको यात्रा सस्मरण समेटिएको पुस्तक बजारमा आएको छ । उनले घुमेका विभिन्न देशमा भोगेका कथा व्यथा समेटिएको उक्त पुस्तकका दुई वटा सम्भावना र उधारो सेक्स नामको अंश हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
एक दिन ब्रेकफास्ट खाएपछि डायनाले मलाई भनी, “तिमी मसँग सावना जान्छौ?”
मैले तुरून्तै उत्तर दिएँ “जान्छु।” तर मलाई थाहा थिएन सावना कस्तो हुन्छ भन्ने। काठमाडौँमा यसको नामसम्म सुनेको हुँ। आज नौलो चीजको अनुभव गर्न पाउने भएँ भनेर गद्गद् भएँ।
डायनाले पुरानो साइकल भाडामा लिई।
होटलबाट केही किलोमिटर पर एउटा सावना घर पुगियो। रिसेप्सनमा गएर डायनाले हामी दुई जनाको पैसा तिरी।
त्यहीँ छेउ उभिएर फुत्त–फुत्त तल र माथिका लुगा फुकाली, हाम्रा गाउँघरमा साना केटाकेटीले लुगा फुकाले जस्तो! अनि एउटा ठूलो टावलले वक्षस्थल छोपी। गोरी अमेरिकन युवतीका सेता चिल्ला तिघ्रा र छाती देखेँ मैले। मेरा उत्सुक आँखाले उसका गोरा छाला नियाल्न नपाउँदै ऊ सावनाको कोठाभित्र पसी। म केही बेर त्यही टेबलमा बसिरहेँ।
“तिमी आउँदैनौ भित्र?”, उसले भित्रबाट मलाई भनी, “लुगा खोल र आऊ न भित्र। म यहाँ एक्लै छु।”
“ह“, लुगा खोलेर भित्र आऊ? हैन के भन्छे यो अमेरिकन तरूनी?”, आफैँसँग बोलेँ। लुगा खोलेर भित्र जानुको अर्थ के? त्यो पनि ऊ एक्लै भएको कोठामा?
डायना मभन्दा केही वर्ष मात्र जेठी भए पनि गोरी युवतीसँग यो यात्रामा सम्भोगमा लीन हुन पाइने भइयो भन्ने सोच्दै मन उद्वेलित भयो। फोक्सोले सास चाँडोे–चाँडो फेर्न थाल्यो। मुटुको धड्कन बढेर आयो।
विस्तारै लुगा खोलेँ र टावल बेरेँ। एक छिन उभिएँ र गोरीसँगको सम्भोगबारे सोचेँ। अनि आफूलाई दह्रो पारेर भित्र पसेँ। ऊ पसिनाले निथु्रक्क भिजेकी थिई। म पनि भित्र पस्नासाथ पसिनैपसिना हुँदै गएँ। तर एक छिनमै तातो बाफले अत्यास लागेजस्तो भो। मन भने चञ्चल थियो। डायनाप्रति सम्मोहित भइसकेको थियो। कतिखेर उसले अँगालोमा डाक्ली भन्ने मनमा लाग्दै थियो, दुई जना गोरेहरु पनि भित्र पसे। एउटा कुनामा बसे र बाफ लिन थाले।
हत्तेरी, सावना त शरीरलाई बाफले नुहाउने ठाउँ पो रहेछ!
देब्रे हातको पाखुरामा लामखुट्टे बस्यो, टोक्नलाई। मार्नलाई ठोकेँ। फुत्केर उड्यो। केही बेरमा फेरि बस्यो। फेरि ठोकेँ। मर्छु भन्ने थाहा पाएर पनि लामखुट्टेले मलाई टोक्न छोड्दैन। ऊ नमरून्जेल भोकले उसलाई पनि छोड्दैन। जीवन रहुन्जेल यसरी नै मान्छे सासको आश गरिरहन्छ। क्युबानहरु पनि यस्तै भोका लामखुट्टे जस्तै लाग्छन् मलाई।
हवानामा जुलियोको घरमा बास बसेको म भने क्युबानहरुजस्तै अभावमा थिएँ।
झोलामा बाँकी रहेका टी–सर्टहरु दश डलरमा बेचेँ। जुलियोले अर्को पेइङ गेस्ट नआउन्जेल मलाई बस्न आग्रह गर्‍यो। मैले नकार्ने कुरै भएन। हाइटी जाने मेरो योजना खर्च अभावले विफल भइरहेको थियो। कतैबाट टिकट पाइरहेको थिइनँ। अमेरिका फर्कने प्रयासमा एम्बेसी चहारेँ, त्यो पनि असम्भव भयो। म खुला बन्दी भएँ क्युबामा।
दिनभरिको थकित शरीरलाई क्यारेबियन सीको मालेकोन डिलमा लगेर बिसाएँ। होटल, रेस्टुरेन्ट सोध्नेदेखि पैसा माग्ने र तरूनी मिलाउनेको भीड।
कसैलाई एकान्तमा बसेर केही सोच्ने फुर्सदै दिन्नन् क्युबानहरु। युरोप, अमेरिकामा साइकलमा दुई जनासँगै चढ्दा अनौठो मान्ने पर्यटकहरु यहा“ साइकलको पछाडि केटी राखेर कुदाइरहेका छन्। साइकल पर्यटकले कुदाए पनि कुदाउन लगाउने चाहिँ तरूनीहरु नै हुन्। हो, क्युबा सेक्सको स्वर्ग हो, म मान्छु, तर भोको पेटमा सेक्स? असम्भव!
समुद्रको छालमा रत्तीभर पनि हराउन दिएनन् क्युबान युवतीहरुले। दश थरी मान्छेको वरिपरि बस्नुभन्दा तरूनीहरुसँगै जानु उचित मानेर हिँडेँ म। दुइटी तरूनी, अन्दाजी सत्र–अठार वर्षका। जे होस्, टिनएजकै हुन्। हाम्रो देशका कोरली गाई जस्ता। सलक्क परेका भन्छौँ नि हामी, त्यस्तै!
लागेँ, उनीहरुकै पछि। करीब दुई–तीन किलोमिटर हिँडेपछि मलाई असन वा पाटनको पुरानो गल्लीको छिँडीतिर पुगे जस्तै लाग्यो। ठ्याक्कै उस्तै। त्यस्तै घर। त्यस्तै झ्यालढोका। त्यस्तै आग्लाहरु। गल्लीको भत्कन लागेको पुरानो घरको तेस्रो तलामा तिनीहरुको कोठा रहेछ। एउटीले चोरझैँ झ्यालबाट पसेर ढोका खोली। यो उनीहरुको कोठा होइन कि भन्ने शङ्का लाग्यो। भित्र पसेपछि ढुक्क भएँ, उनीहरुकै रहेछ।
भित्ताका सुन्दर तस्वीरहरुले बताइरहेका थिए। कोठाको आकारप्रकार सबैले मलाई काठमाडौँको सम्झना दिलाए। त्यति बेला पुतलीसडकनजिकै एउटा प्रसिद्ध घर थियो, होलिडे इन। त्यो घरको एउटा कोठामा मैले छ वर्ष बिताएँ। सात तला अठचालीस कोठाको उक्त घरमा बत्ती थिएन। त्यसैले त्यो घर प्रसिद्ध थियो। केशव त्यो घरको दादा थियो। हामीले भाडा तिर्नुपर्दैनथ्यो। बदलामा हामी घरको सुरक्षा गर्थ्यौं। मेरो कोठा सार्वजनिक थियो। कुनै दिन तेह्र जनासम्म सुत्यौँ। छ वर्षको अवधिमा मैले कहिल्यै एक्लै सुत्ने मौका पाइनँ। कोठामा जो पहिला पुग्थ्यो, खाटमा उही सुत्थ्यो। पढ्नेहरु पढ्थे, जागीरेहरु जागीर खान्थे, बेरोजगारहरु डुलेर दिन बिताउँथे, त्यो घर धेरैको आश्रयस्थल बन्यो।
मसँग त्यो घरमा धेरै रात गायक अरूण थापा पनि सुते। एक गिलास रक्सीमा गितार बजाएर धेरै गीत सुनाए। मलाई उनको फ्यान बनाउने पनि त्यही घर नै हो। त्यही घरबाट काठमाडौँको जीवन शुरु गरेको उत्तम अहिले स्विटजरल्यान्डको तारे होटलमा म्यानेजर छ। भीमसेन प्रसिद्ध कम्पनीको ट्रेकिङ गाइड बन्यो। मन्जिल, राजकुमार, जनक, हरि, नरहरिहरुले आफ्नो करिअर त्यहीँबाटै शुरु गरे। सुरजले आफ्नी प्रेमिकालाई त्यहीँ भेट्टायो। स्वास्नी पनि त्यहीँ बनायो। मैले जनआन्दोलनमा गोली लाग्दा त्यही कोठामा आरामको सास फेरेँ।
सम्झिरहेथेँ काठमाडौँ, एउटी तरूनीले तिघ्रामा प्याट्ट पारी। केही बेर गफ गरेपछि सेक्सको कुरा भयो। उनीहरुसँगै पालैपालो सेक्स गर्नुपर्ने उनीहरुकै आग्रह थियो। मैले भोको छु भनेपछि एउटी खानेकुरा लिन गई, मसँग दुई डलर लिएर। अर्कीले मसँग बार्गेनिङ गर्न थाली। एउटीको एक पटकको चालीस डलर रे! पूरै रात बिताए रेट अझै कम रेट हुन सक्छ रे! म पनि के कम, बार्गेनिङ नै सम्झेर मोलमोलाइ गर्न थालेँ। उसको रेटलाई दश डलरमा झारेँ।
दुई डलरको बन बोकेर अर्की तरूनी आइपुगी। मैले टोकेको जुठो बन दुइटीले खोसाखोस गरेर खाए। त्यसपछि एउटीले मेरो टी–सर्ट उतारी। मेरो शरीरका अङ्गह
रु देखेर सोधी, “बडीबिल्डर हो कि क्या हो?”
अर्कीले जुत्ता–मोजा खोलिदिई।
अब दुइटीले नै मलाई मुसार्न थाले। ममा उत्तेजना शून्य बराबर थियो। दुइटी भोकाएका सिंहिनी जस्तै देखिएका थिए। उनीहरु 'ब्रा' मा उत्रिसकेका थिए। एउटी मेरो पाइन्टमाथि तिघ्रामा चढी। अर्कीले पछाडिबाट आफ्ना दुई जाँघबीचको यौनाङ्ग मेरो ढाडमा दलिरहेकी थिई। सिनेमामा हिरोइनले हिरोको छातीमा समाएजसरी पछाडिबाट समाइरहेकी थिई घरीघरी।
तिघ्रामा चढेकीले दश डलर मागी। मैले 'पैसा छैन' भनेँ। पत्याइन। फेरि गालामा म्वाइँ खाई। पछाडिकीले काँध सुमसुम्याउन थाली। मैलै 'साँच्चिकै पैसा छैन' भन्दै खाली वालेट देखाएँ। उनीहरुले बल्ल पत्याए। उनीहरुले 'मनाना' अर्थात् 'भोलि' भने। मैले हुन्छ भनेँ र जुरूक्क उठेँ। उनीहरुले मलाई फेरि लडाए र भने, “पैसा भोलि दिए हुन्छ।”
उनीहरुले उधारो सेक्स गर्न आग्रह गरे। म 'मनाना' भन्दै लुगा लगाएर त्यहा“बाट निस्किएँ।
Posted in: ebook,साहित्य